आज तपाईँको राशीमा धन, धर्म र भाग्यको प्रभाव कस्तो होला ? हेर्नुस् - Sacho Post
आज तपाईँको राशीमा धन, धर्म र भाग्यको प्रभाव कस्तो होला ? हेर्नुस्
२०७७ भाद्र २३, मंगलवार ०७:२५ बजे
वि.सं. २०७७ साल, भाद्र महिना, २३ गते, मङ्गलवार, शुद्धआश्विन कृष्ण (अनलागा) षष्ठी, भरिणी नक्षत्र, मेष राशिको चन्द्रमा, व्याघात योग, गर र वणिज करण, प्रमादी संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : सोह्रश्राद्धअन्तर्गत षष्ठी श्राद्ध, शिक्षा तथा साक्षरता दिवस, भद्रा र त्रिपुष्कर योग राती ०८.१७ मिनेटपछि, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : सोह्रश्राद्धअन्तर्गत सप्तमी श्राद्ध, महालक्ष्मी व्रत समाप्ति, भद्रा करण बिहान ०९.०४ बजेसम्म ।
साथी र बन्धुबान्धवको सहयोग मिल्नेछ । लामो समयदेखि किन्न खोजेको वस्तु खरिद गरिनेछ । घरपरिवारका लागि कुनै भौतिक साधन जोडिनेछ । अपरान्हपछि डुब्न लागेको धन फिर्ता आउने वा लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्ने योग छ । दानपुण्यमा लगानी गर्ने समय छ ।
नयाँ कामको लागि विचार आउन सक्छ । अपरान्हपछि जोश जाँगर आउनेछ । व्यापार व्यवसायमा राम्रै रहेको छ । आफन्तहरुले सहयोग गर्नेछन् । आफूले सोचेअनुसार तुरुन्तै काम नबने पनि गरेका काममा सफलता मिल्नेछ । दिउँसोदेखि महत्त्वाकांक्षी काम प्रारम्भ हुनेछ।
विहानीपख प्राज्ञिक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ । श्रममूलक काममा काम गर्नेहरु व्यस्त छ । दिउँसो हुनअघि नै महत्वपूर्ण काम गर्नु राम्रो हुन्छ । अपरान्हपछि व्यापार व्यवसायमा ध्यान जान सक्दैन । अवसरका लागि दौडधुप गर्नुपर्ला। व्यवसायमा थप लगानी आवश्यक पर्नेछ।
सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेले वचस्र्व कायम गर्न सक्नेछन् । रोकिएको काम सम्पन्न हुनेछ । सामाजिक क्षेत्र र राज्य पक्षबाट दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। उद्योगधन्दा र व्यापारमा राम्रो छ । आम्दानीको प्रयास सफल हुनेछ । लगनशीलताले अवसर दिलाउनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ।आयआर्जनका नयाँ स्रोतसमेत फेला पर्नेछन्।
ठूलाबडाको साथ सहयोग पाइनेछ । नयाँ ठाउँमा निवेश गर्ने योग छ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछ । व्यापार गर्नेले बेलुकीपख राम्रो आर्थिक लाभ गर्नेछन् । लगानीमा रहेको रकम उठाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ । चिताएको काम बनाउन सकिनेछ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ हुन सक्छ।
आजबाट सकारात्मक भएर काम शुरु गर्ने समय छ । सिर्जनात्मक क्षेत्रबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ । उतारचढाव आए पनि व्यापारबाट राम्रै आम्दानी हुनेछ । आँटेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । । श्रम परे पनि लगनशीलताले केही उपलब्धि दिलाउन सक्छ। समयमा काम सम्पादन गर्न नसकिए पनि दिगो योजना बनाउन सकिनेछ।
महत्वपूर्ण काम मध्यान्हभित्रै सक्नु राम्रो हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा राम्रै रहेको छ तर ढिलागरी काम सम्पन्न हुनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। रमाइलो व्यापारिक यात्रा हुनेछ। आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ। दिन ढल्दै जाँदौ वेचैनी बढ्नेछ । काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ ।
मावली वा आमाको आशिर्वाद लिएर महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्ने समय छ । दिन ढल्दै जाँदा सबै किसिमका झैँझमेलाको अन्त्य हुनेछ । मेहनतले प्रतिस्पर्धामा विजयी बन्ने योग छ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ।
बिहानको समय राम्रो छ । व्यापार व्यवसाय र पेशाबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ । चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ। मिहिनेतले सफलता दिलाउनेछ । प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी भइनेछ। आज संयम हुनुहोला साँझदेखि तनाव र निराशा बढ्नसक्छ ।
दिनभरी दौडधूप र झमेला बेहोर्नुपरे पनि साँझपख सन्तुष्टि मिल्ने समय छ । बौद्धिक क्षेत्रमा कमि भए पनि आज ज्ञानमूलक क्षेत्रमा खट्नु राम्रो हुनेछ । बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउला। दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
समय मध्यम छ । यात्राको योग छ । दिउँसोबाट पारिवारिक र घरायासी काममा समय बित्नेछ । व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेको छ । खर्च बढेपनि घरायासी सुख सुविधाको सामाग्रीको जोहो हुनेछ । सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ। दिउँसोदेखि आफन्तबाट सावधानी अपनाउनुहोला।
मेवा मिष्ठान्न आदि खाने वातावरण मिल्नेछ । कृषि बन र माटो सम्बन्धी व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ । मान प्रतिष्ठा बढ्नेछ । वित्तिय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीको लागि राम्रो समय छ । मनग्ये आम्दानी हुनेछ । परोपकार र दानपुण्यको क्षेत्रमा मन जानेछ । शुभचिन्तकको सुझावले फाइदा पुर्याउनेछ । अग्रजहरूको सहयोग जुट्नाले राम्रै काम गर्न सकिनेछ।